कोरोना कहरः कसरी काम गर्दैछन् स्वदेशी औषधि उत्पादक? :: Setopati
मिरा खतिवडा काठमाडौं, चैत १६
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गत मंगलबारदेखि लकडाउन गरेको छ।
अधिकांश मानिस घरभित्रै बसिरहेको समयमा औषधि उत्पादक भने यतिबेला उत्पादन बढाउनमा व्यस्त छन्।
कतै महामारी फैलिएर औषधिमा संकट आउने त होइन भन्ने त्रास उनीहरूमा छ।
यो समय आफूहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको औषधि उत्पादक बताउँछन्।
तर, औषधिलाई अभाव हुन नदिन चुनौतीको बाबजुद उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइरहेको औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का महासचिव विप्लव अधिकारीको दाबी छ।
उनले सरकारसँग पनि तत्काल आवश्यक पर्नसक्ने वस्तु, औषधि खरिद प्रक्रियालगायतका विषयमा छलफल गरिरहेको बताए।
‘लकडाउनले औषधि विक्री वितरण र रोकिएका कच्चा पदार्थ कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘लामो प्रयास, भारतीय पक्षसँगको छलफल र मन्त्रालयको सहयोगले भारतीय भन्सारमा रोकिएको सामान निकाल्न सकिने विश्वास बढेको छ।’
अहिले दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने लगायत कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा रातिको समय प्रयोग गर्ने हो कि! भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको उनी बताउँछन्।
‘कर्मचारीलाई फ्याक्ट्रीसम्म आउन समस्या छ, रोगको संक्रमण होला कि! भन्ने त्रास सबैलाई हुन्छ। तर, यस्ता चुनौतीलाई सामाना गर्दै हामी भोलिका दिनमा धेरै बिरामी निस्किए पनि धान्न सक्ने औषधि बनाउन लागिपरेका र्छौं’, उनले भने।
लकडाउनको समयमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन् ‘कर्मचारीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम अघि बढाइरहेका छौं। औषधिमा कमी नआओस् भनेर सबै उद्योगी समन्वयन गरेर काम गरिरहेका छौ।’
सरकारले औषधि उद्योगको परिचय पत्रले काम चल्छ भने पनि त्यसले काम नगरेको बताउँछन् उनी।
‘सरकारको निर्णअनुसार औषधि उद्योगको परिचयपत्रले काम चल्छ भनिएको छ। तर, त्यो ‘प्राक्टिकल्ली’ लागू हुनसकेको छैन। जसले गर्दा फ्याक्ट्री आवात/जावातमा गाह्रो भइरहेको छ र उत्पादनमा ह्रास आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, औषधिको कृत्रिम अभाव नहोस् भनेर हामी चुनौतीलाई सामना गरेर निरन्तरता दिइरहेका छौं।
उनले भने कृत्रिम कालोबजारी नहोस् भनेर नै उचित मूल्यमा नै औषधि विक्री/वितरण गरिरहेका छौं।’
कच्चापदार्थ अत्यन्तै आवश्यक भएकाले सरकराले यसमा सहजता गरेको पाण्डेले बताए।
‘सरकारले अत्यावश्यक सामानमा अवरोध गरेको छैन, त्यसैले अहिलेसम्म कच्चापदार्थमा समस्या छैन’, उनले भने।
उनले तीन/चार महिनालाई धान्न सक्ने औषधि स्टक रहेको जानकारी दिए।
सरकारले पनि उद्योगलाई कुनै रोकतोक नगरी काम गर्न सहज बनाएको उनले बताए। ‘दुई/तीन महिनालाई त गाह्रो छैन। तर, यही अवस्था लम्बिए गाह्रो हुने अवस्था छ’, क्षेत्रीले भने।
६. ग्यास्ट्रो इन्टेस्नल
नेपालमा १२ सयभन्दा बढी रेन्जका औषधि बन्ने लोमशका निर्देशक पाण्डले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार माथि उल्लेखित औषधिबाहेक नेपालमा उत्पादन भएको एन्टिक्यान्सर औषधि पनि बनिरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १६, २०७६, ०१:१५:००